Wararka ugu Danbeeyay Dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ( 13 May )
HomeWararka CaalamkaWararka ugu Danbeeyay Dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ( 13 May )
May 13, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
Kuwani waa qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee la xidhiidha dagaalka Ukraine Jimco 13 May.
*Maraykanku waxa uu Ruushka ku eedeyay in uu si qasab ah dadka Ukrain uga qaadayo meelaha uu maamulo. Gaar ahaan kuwa nugul waa dadka sida cad uga soo horjeeda duulaanka, ayuu yiri danjiraha Mareykanka ee Ururka Amniga iyo Iskaashiga Yurub (OSCE).
Bayaan ayaa taageeraya eedeymaha ay soo jeediyeen dadka reer Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa ku qiyaastay in ku dhawaad ​​1.2 milyan oo Ukrain ah laga tarxiilay Ruushka ama meelaha uu Ruushku maamulo. Mareykanka ayaa ku andacoonaya in dadka reer Ukraine la geynayo waxa loogu yeero “xeryaha sifeynta”,
* Tan iyo markii duulaanku bilowday, Ruushku waxa ay weerareen 570 isbitaal, xarumo caafimaad iyo goobo kale oo caafimaad, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Weeraradu waxay ka dhigeen 101 isbitaal oo burburay, ayuu yidhi.
Taasi waa nacasnimo. Taasi waa cawaannimo. Waa is-burburinta Ruushka oo ah dawlad uu qof kasta oo adduunka ah u arki karo qaran la sameeyay, Zelensky ayaa sidaas yidhi Khamiista. Zelensky ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Ruushka ay Khamiistii weerareen gobolka Chernihiv ayna duqeeyeen dhowr iskuul.
* Ukrain ayaa sheegtay in ay weerar ku qaadeen markab ay leeyihiin ciidamada badda Ruushka oo marayay badda madow. Habeenimadii Khamiista sida ay sheegeen mas’uuliyiinta militariga ee gobolka Odesa.
Serhiy Bratsjuk, oo ah madaxa maamulka ciidamada deegaanka, ayaa sheegay in uu yahay markab saadka oo lagu magacaabo Vsevolod Bobrov kaasi oo Khasaaro soo gaaray sida laga soo xigtay Bratsjuk, laakiin ma uusan sheegin wax ku saabsan heerka uu gaarsiisan yahay weerarka, sida uu qoray Sky News.
* Madaxda sare ee YouTube, Tiktok, Twitter iyo Facebook milkiilaha Meta ayaa laga codsanayaa inay kaydiyaan macluumaadka loo isticmaali karo caddayn ahaan dembiyada dagaalka Ruushka ee Ukraine. Waxaa jira afar xubnaha dimuqraadiga ah oo mid kastaa uu hogaamiyo guddi u gaar ah oo ka tirsan Aqalka Wakiilada kuwaas oo soo diray waraaqaha, ayuu qoray NBC News.
Warqadda loo diray madaxa shirkadda Meta Mark Zuckerberg ayaa lagu sheegay waxyaabo ay ka mid yihiin, in ay ku boorrinayaan “Meta in ay qaado tillaabooyin lagu ilaalinayo laguna kaydinayo waxyaabaha la wadaago ee shirkadda oo laga yaabo in loo isticmaalo caddayn ahaan” marka dowladda Mareykanka iyo hay’adaha caalamiga ah ay baaraan eedeymaha Dambiyada dagaalka Ruushka.
*Ugu yaraan shan qof oo rayid ah ayaa ku dhintay dagaal culus oo ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ku dhexmaray gobolka Donetsk, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Ukraine.
Maamulka gobolka ayaa ku qoray Telegram in afar qof lagu dilay Novoselivka, Avdiivka iyo Lyman. Warbaahinta maxalliga ah ayaa qortay in qof kale lagu dilay dagaal ka dhacay Jasnuvata, oo ay maamulaan xoogagga taageersan Ruushka.
Xogta si madax banaan looma xaqiijin. Qaramada Midoobay waxay heshay xaqiijin ah in ugu yaraan 3,500 oo rayid ah lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay, laakiin waxay aaminsan tahay in tirada dhabta ah ay aad uga badan tahay.